Mpamatsy mpandrindra asidra sy orinasa | Mpanamboatra mpandrindra asidra any Sina
Ny asidra fumaric, fantatra koa amin'ny anarana hoe asidra fumaric, asidra fumaric, asidra purpuric na asidra lichenic, dia kristaly tsy misy loko sy mora mirehitra, asidra karboksilika azo avy amin'ny butena. Ny asidra fumaric dia mitetika toy ny voankazo ary hita ao anaty ahidrano Corydalis, Boletus, Lichen ary ahidrano Islandy. Fonosana: 1kg / kitapo, 25kgs / amponga (Kitapo plastika roa ao anaty sy Papier-drum na fitakian'ny mpanjifa.) Fitehirizana: Tehirizo ao anaty kaontenera tery sy mahazaka hazavana, aza ialana amin'ny tara-masoandro mivantana, ny hamandoana ary ny hafanana be loatra. Shel ...
Ny asidra malika dia fitambarana biolojika miaraka amina molekiola C4H6O5. Izy io dia mandray anjara amin'ny tsiro marikivy mahafinaritra amin'ny voankazo, ary ampiasaina amin'ny famenon-tsakafo. Ny asidra malika dia manana endrika stereoisomerika roa (L- sy D-enantiomers), na dia ny L-isomer ihany no misy voajanahary. Malic Acid dia manana hygroscopic mahery, mety levona anaty rano sy etanol. Misy asidra mahafinaritra manokana. 1.Malic Acid tsiro dia manakaiky ny paoma voajanahary marikivy, ampitahaina amin'ny asidra citric, miaraka amin'ny asidra, tsiro ary malefaka, fonenana lava t ...
Acidity Regulator BP98 Powder kristaly 99% min Sodium Citrate
Haben'ny sombiny: 12-40mesh, kilasy sakafo 30- 100mesh BP98 / usp fonosana: 25kg / kitapo Fiainan'ny talantalana: 2 taona Fonosana sy fandefasana entana: 25kg / kitapo, 25mt / 20'FCL Fotoana itarihana: 10 andro aorian'ny nahazoana pretra Sodium citrate dia ampiasaina hanatsarana ny tsiro sy hitazomana ny fiorenan'ny akora mavitrika amin'ny sakafo sy zava-pisotro ao amin'ny indostrian'ny detergent, afaka manolo ny Sodium tripolyphosphate ho toy ny detergent azo antoka izy io, ary azo ampiasaina amin'ny fermentation, injection, photography ary ny plating vy. (1) Amin'ny indostrian'ny sakafo: ...
Ny asidra tartarika dia asidra voajanahary kristaly fotsy izay miseho voajanahary amin'ny zavamaniry maro, indrindra amin'ny voaloboka. Ny sira, potasiota potasiota, fantatra amin'ny anarana hoe crème of tartar, dia mivoatra voajanahary amin'ny dingan'ny fanemorana divay. Matetika izy io dia afangaro amin'ny sodium bicarbonate ary amidy ho toy ny vovoka fanaova ampiasaina amin'ny fanaovana masirasira amin'ny fanomanana sakafo. Ny asidra mihitsy dia ampiana amin'ny sakafo ho toy ny antioxidant ary manome ny tsiro marikivy mampiavaka azy. Fonosana sy fandefasana entana: 25kg / kitapo, 20mt / 20 & ...
Ny glycine (fanafohezana Gly) dia fantatra koa amin'ny anarana hoe asidra-acetic. Ny endriny simika dia C2H5NO2, izay fotsy matevina amin'ny hafanan'ny trano sy ny tsindry. Izy io dia asidra amine izay manana rafitra tsotra indrindra amin'ny andiana asidra amine ary tsy ilaina amin'ny vatan'olombelona. Glycine dia karazana asidra amine tsy ilaina ho an'ny vatan'olombelona. Fanafohezana anarana: ny gly no rafitra asidra amine asidra tsotra indrindra, ny vatana dia tsy takiana asidra amine, na vondrona misy asidra na fototra miasa ao amin'ny molekiola, ca ...
Monidride asidra Citric / Asidra Citric Anhydrous
Ny asidra Citric dia ampiasaina matetika ho toy ny mpandrendrika manitra, preservative ho an'ny indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro. Izy io koa dia azo ampiasaina ho toy ny antioxidant, plastika, detergent amin'ny indostria simika, cosmetika ary detergent. Amin'ny maha-fampidinana sakafo azy, ny Citric Acid Monohidraty dia mpamatsy sakafo tena ilaina amin'ny famatsian-tsika. Amin'ny maha-mpamatsy sakafo fanampiny sy mpamatsy sakafo any Shina anay, afaka manome anao Mondratotidra asidra asidra avo lenta ianao. 9.Storage sy fitaterana: tokony hotehirizina anaty faritra maina sy rivotra ...